‘अरिंगाल, हरेउ र छौंडाछौंडी’का नाममा
डिल्ली आचार्य काठमाडौं, २१असार
शाहीकालमा एकजना पत्रकार दाजुले टेलिभिजन सो चलाउँथे । कार्यक्रमको नाम बिर्सें । तर, प्रसंग याद छ । उनी त्यसबेलाका सञ्चारमन्त्री टंक ढकाललाई प्रश्न गर्थे, ‘आन्दोलनका नाममा रत्नपार्कमा सर्वसाधारण चढेको गाडी रोकेर अवरोध गर्ने र राजाविरुद्ध नाराजुलुस गर्ने यी सात दल आतंककारी नै हुन् नि, हैन मन्त्रीज्यू ?’
टंक ढकाल छोटो जबाफ दिन्थे, ‘हो नि डेफिनेट्ली हो ।’
१४ वर्षपछि अचानक यो सन्दर्भ सम्झाइदिए, प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले । बिहानै उनको ट्वीट आयो । पढें ।
मैले टंक ढकाल बिर्सेर कांग्रेस सभापति देउवालाई याद गरेछु ।
संघ र प्रदेशको चुनावताका देउवा भाषण गर्दै हिँड्थे, ‘कम्युनिस्ट शासन आयो भने रुन पनि पाइँदैन ।’
‘बड्डा’ले के भन्या होलान् जस्तो लाग्थ्यो । आज देउवा वडो दूरदर्शी लाग्दै छन् मलाई ।
सत्तामा यतिका जोकर भएपछि हाँस्दाहाँस्दै दिन बितेको पत्तै हुँदैन, कहाँ रुन पाउनु !
कांग्रेस सभापति देउवा यतिबेला घरमा सप्ताहमा व्यस्त छन् । फुसर्दमा भएको भए उनी पक्कै पेट मिचीमिची हास्थें, प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकारको ट्वीट पढेर ।
मलाई झलझली याद आउँछ, हरेक बुधबार बेलुकाको । घर पुगेर मेरो भात खाने र ‘जनतासँग प्रधानमन्त्री’ कार्यक्रम आउने समय जुधिरहन्छ ।
भात खाँदै एक्लै टिभी हेर्छु । थुप्रै हप्ता भो, हाँस्छु । केही यस्ता हप्ता छन्, एक्लै हुँदा पनि आफैंसँग लाज लाग्छ, प्रस्तोताको प्रश्न र प्रधानमन्त्रीज्यूको जबाफ सुनेर ।
म कसम खाएर भन्छु, मलाई मेरा प्रधानमन्त्रीसँग कति पनि रिसराग छैन । तर, चिन्ता भने बढेमानका छन् मलाई ।
उनी कहिले कार्यकर्तालाई अरिंगाल जस्तो बन्न भन्छन् । संसदमा भएको विरोधलाई उनी हरेउको आक्रमण भन्दिन्छन् ।
मलाई २०५१ सालतिरको याद आउँछ, जुनबेला लगातार ४९ दिनसम्म संसद् अवरुद्ध हुन्थ्यो । त्यसबेलाका हरेउ कस्ता रहेछन्, सम्झँदै पनि डर लाग्छ ।
प्रधानमन्त्रीले संसदमा शब्द प्रयोग गर्नुभन्दा अघि मेरो दिमागमा आएकै हो, म कति ‘निम्छरो’ छु, मेरो देशको प्रधानमन्त्रीले संयमता नअपनाउँदा पनि केही गर्न नसक्ने भनेर ।
संसदमा प्रधानमन्त्रीले फ्याट्ट भनिदिए निम्छरा प्रश्न भनेर । मलाई तत्काल डर पनि लाग्यो ।
किनकि मैलै पनि भेट्न पाएको भए ‘प्रधानमन्त्रीज्यू, किन तपाइ र तपाईंका सल्लाहकार जे पायो त्यही बोल्छन्’ भनेर सोध्ने थिए । धन्न मेरो पहुँच पुगेन र म जोगिएँ यस्ता निम्छरा प्रश्न सोध्नबाट ।
प्रधानमन्त्रीज्यू ! अस्ति धुम्बाराहीको भाषण सुनें । मास्क लगाएर सरकारका विरोधी मात्र हिँडेका छन् । भोलिपल्ट रत्नपार्कबाट बुद्धनगरस्थित मेरो अफिस आउँदै थिएँ । नेकपाका एकजना नेता टेम्पोमा यात्रा गर्दैै थिए । पुलुक्क हेरें । मुखमा कालो मास्क लगाएका रहेछन् । सायद उनी संसद् भवन बानेश्वर जाँदै थिए ।
मलाई लाग्यो, धन्न विष्णु रिमालहरुले देखेनन् तिनलाई । नत्र मुखमा, त्यो पनि कालो मास्क लगाएर तिनले सरकारको विरोध गरेको भन्दै कारबाही पाउने थिए होलान्, प्रमज्यूको ‘कोटरी’का तर्फबाट ।
म प्रधानमन्त्रीको पार्टीको भोटर, आवश्यक पर्दा कार्यकर्ता भन्दिए पनि हुन्छ । आफ्ना नेता, त्यसमाथि मेरा प्रधानमन्त्रीले भनेपछि नमान्ने कुरा भएन पनि ।
म हरेक दिन मेरो बासस्थान लुभुबाट मोटरसाइकल चढेर बुद्धनगर आउँछु । लाग्यो, मास्क लगाएर प्रधानमन्त्रीको विरोधी किन हुनु ।
लगाएको मास्क खोलें । त्यो धुलाम्मे बाटोमा मास्क लगाएर हिँडेको डेढ वर्ष भएछ । जे पर्ला, सरकारको विरोधी बन्दिनँ भनेर मास्क खोलें ।
बेलुका के भयो थाहा छ सरकार ? बाथरुम गएर ख्वाक्क खोकेको मुखबाट कालो डल्डो बाथरुममा खुत्रुक्क खस्यो । म विपद्मा परें, त्यो फोहोर कसलाई देखाऊँ । फेरि लाग्यो भो, विरोध गर्दिनँ बरु सहन्छु ।
त्यही भएर दुई दिन ज्वरो आए पनि मैले अहिलेसम्म मास्क लगाएको छैन । सरकार अब कति दिन मास्क नलगाई म समर्थन गरिरहूँ ?
धेरै दिन भो सामाजिक सञ्जालमा पनि मैले सरकारको विरोध गरेको छैन । मलाई थाहा छ, विरोधमा लेख्यो भने म कुनै बेला साइबर क्राइमको अपराधमा थुनिन सक्छु ।
त्यही भएर मैले अरिंगाल सहें, हरेउ पनि सहें । मलाई लाग्दै छ, प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकारले भनेजस्तै म (हामी) अब छौंडाछाैंडी पनि सहन सक्छु/सक्छौं ।
बाल्यकालमा म असाध्यै डराउँथें । अहिले सम्झँदा थाहा छैन, त्यो डर कोसँग हो । अहिले फेरि डर लाग्न थालेको छ ।
मलाई राम्ररी थाहा छ, त्यो डर प्रधानमन्त्रीका केही सल्लाहकारको हर्कतसँग हो । सल्लाहकारको सल्लाहमा आउने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिसँग हो ।
मलाई मात्र होइन, म जस्ता धेरै जनता डराएका छन् । प्रधानमन्त्रीज्यू ! म चाहन्छु, मेरो र आमजनताको डर फेरि भागोस्, जसरी मैले कारण नै थाहा नपाई मेरो बाल्यकालको डर भाग्यो ।
म चाहन्छु, म र मजस्तै जनताले पनि किन डराएँ भनेर भोलि बिर्सिउन् । केही वर्षभित्रै मेरो गृह जिल्ला इलामबाट एकछिनमा म रेल चढेर काठमाडाैं आइपुगूँ । उपत्यकामा मोनो रेल चढेर घुम्न पाऊँ । मेरो देशलाई होइन, मेरो देशले सहयोग गरेको हेर्न पाऊँ... तपाईंले भन्दै आएजस्तो ।
सम्भव छ नि हैन प्रधानमन्त्रीज्यू ? कि म फेरि डराइरहूँ ?
तर, आज भने साहस आयो, मलाई किन थाहा छ ? सामाजिक सञ्जालमा जे पनि लेख्न हुने रहेछ । प्रधानमन्त्रीकै राजनीतिक सल्लाहकारले त लेखे, म निम्छरोले लेख्दा के हुन्छ र ?
म यो आलेख मेरो फेसबुकमा पनि सेयर गर्छु र म ढुक्क छु, म अब निम्छरो रहिनँ । निम्छरा ती ‘छौंडाछौंडी’ हुन्, जसले सरकारको विरोधमा बोल्छ ।
प्रकाशित मिति: आईतबार, असार २२, २०७६, १०:३५:००
डिल्ली आचार्य @dilliach
चौथो वरीयताका गौतम शक्तिशाली उपाध्यक्ष बन्दै
परी तामाङकाे डेरा
मेरा बाको झापु
प्रधानमन्त्री मातहत बस्ने मानवअधिकार आयोगकै चाहना
मन्त्र नआउने पुजारीदेखि धार्मिक नामका कम्पनीसम्म जोखिममा